Ụlọ Nzukọ Eziokwu RCGP - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụlọ Nzukọ Eziokwu RCGP
Enyerela Reward Foundation enwetara RCGP ọnọdụ nkwenye iji nyefee ụlọ ọrụ ihe omumu otu ụbọchị nke Royal College of General Practitioners nke United Kingdom kwenyeere na Mmetụta Ịntanetị Na-akpali agụụ mmekọahụ na Echiche Ahụike na Ahụ Ike Ahụ. Anyị na-ere ahịa ugbu a dị ka Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ. Ọ na - enye 7 CPD isi maka ụdị ụbọchị zuru oke na kredit 4 maka ụdị ọkara ụbọchị. Nwere ike nweta nkọwa ndị ọzọ gbasara usoro ọmụmụ ọ bụla ma ọ bụ ịmalite ntinye akwụkwọ site na ịpị a njikọ.
RCGP bụ onye otu ọkachamara na onye nlekọta nke ụkpụrụ maka ndị dọkịta ezinụlọ na-arụ ọrụ iji kwalite ịdị mma na isi ahụike. Dịka General Practitioner (GP), ijigide ihe ọmụma gị na idobe nkà gị site na ịga n'ihu na mmepe ọkachamara (CPD) bụ ọrụ ọkachamara. A choro GP ka ha tinye akara 50 (awa) nke Mmụta Ọzụzụ Ọzụzụ na-aga n'ihu kwa afọ dị ka akụkụ nke usoro nlọghachi ọrụ ọkachamara ha.
The Ụkpụrụ Ndị Na-ahụ Maka Ọganihu Mmepe site na Ọmụmụ nke Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Medical Royal na-enye nduzi banyere otu ndị ọkachamara ahụike kwesịrị isi malite CPD. Usoro a nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ịnweta CPD Ebe E Si Nweta maka ndị otu na-esonụ Medical Royal Colleges:
Ngalaba nke Ahụ Ike na Mmebi
College Royal nke Obstetricians na Gynecologists
Royal College of Paediatrics & Ahụike Childmụaka
Royal College of Physicians & Surgeons nke Glasgow
College Royal of Surgeons of Edinburgh
College Royal of Surgeons of England
Ngalaba nke Forensic na Medicine Iwu
Anyị na-emeghekwa ndị ọka iwu, ndị nkụzi na ndị ọkachamara ndị ọzọ. Òtù Iwu Society nke Scotland nabatara ya maka CPD n'okpuru usoro nkwekọrịta onwe ha.
Mmetụta Ịntanetị Na-akpali agụụ mmekọahụ na Echiche Ahụike na Ahụ Ike Ahụ
Ihe omumu nke otu ụbọchị na-enye awa 6 nke nkuzi ihu na ihu na otu awa nke na-agụ n'ihu oge, na-enyefe ruo 7 awa nke CPD credits.
Akara nke ụbọchị ogbako a dị na arịrịọ. A pụkwara inyefe ihe zuru oke dị ka ụbọchị nkeji ụbọchị maka ụbọchị 2 ma ọ bụ dị ka nnọkọ 2-hour na ụbọchị 3.
Ihe omumu ihe zuru oke bu ihe akaebe na-enye ohere di mma maka nkuzi na mkparita uka. Ọ na-ekpuchi:
Nkọwa nke nsogbu ahụike metụtara mmekọahụ na-emetụta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ
Ụbụrụ isi banyere ịṅụ ahụ
Ịgba ogbaaghara na ihe ọ pụtara
Mmetụta na ahụ ike anụ ahụ
Mmetụta na ahụike uche - ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ihe ịma aka na omume
Ihe nkuzi na-agụnye ịkwado nkwado. Ndị bịaranụ ga-enwe ohere ịnweta ụdị ọnụọgụị nke ntanetị, tinyere njikọ zuru oke na akwụkwọ nchọpụta ndị dị mkpa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka Reward Foundation nyefe ihe omumu a na omume gị, Royal College ma ọ bụ Kọmiti Ahụike, biko dobe anyị ederede site na iji mpempe kọntaktị na ala nke ibe a. Anyị nwere ahụmịhe n'izi ihe na USA na gburugburu Europe.